I-GIS ephathekayo, zonke zivela kwi-USB-Geofumadas
I-GIS ephathekayo, yonke into esuka kwi-USB
NgoSeptemba, 2009 Geospatial - GIS, GvSIG, qgis, UDig
Inguqu ye-2 ye-Portable GIS ikhishiwe, isicelo esilumkileyo nje ukuba siphumelele kwi diski yangaphandle, imemori ye-USB kunye nekhamera yedijithali iinkqubo eziyimfuneko zokulawulwa kolwazi lwendawo kwindawo zombini nakwiwebhu.
Ifayile yokufaka ifake i-467 MB, kodwa idinga i-2GB ikhululekile kwi-USB ukuyifaka, ngokuba i-1.2 GB iqhubekile ihamba ne-XNUMX GB ihamba kwindawo efunekayo.
Ziziphi iinkqubo ezibandakanya?
Kuyamangalisa into eyenzayo, ekubeni kwimemori ye-USB ezi nkqubo zilandelayo ziyakwenziwa:
Software ye-desktop ye-GIS
I-GUM ye-Quantum (i-1.02)
I-PostgreSQL (i-8.4.01) (i-PgAdmin III ne-Psql Tools)
Iinkqubo zeenkonzo zewebhu:
Umncedisi wesiseko seMySQ
I-Postgre SQL Data server
I-PgAdmin III (1.10)
Kwaye ezi zixhobo ziza:
SqlSync (ispredishithi yokuvumelanisa yolwazi)
GeoMetadataExtractor (icatshulwa i-metadata ukusuka kwimifanekiso ye-georeferenced)
Shp2Text (guqula iifayile kwi-shp, kunye neikholamu zokulungelelanisa)
I-Ogr2Gui (i-GUI ye-OGR toolkit)
I-ShapeChecker (Ihlola kwaye ilungise iifayile ezikhohlakeleyo)
I sebenza njani
Mane ukhuphele i-installer, uyiqhube ukhethe i-drive apho izakufakwa khona. Oku kwenza okuphunyeziweyo okuqulathe imenyu, incwadi eneenkcukacha ebizwa ngokuba "usbgis" equlathe zonke iinkqubo, kunye nefayile ye autorun.info.
Nanini na xa i-USB ixhunyiwe, "ukuseta i-GIS ephathekayo" kufuneka yenziwe ukuze inkqubo ibone umendo awunikwe ngumhloli kwidiski. Emva koku, kukusebenzisa kuphela iinkqubo, ixesha. Ijongeka ilungile ekusebenzeni kunye neekhompyuter zohlobo lwe-netbook, okanye yokuhamba kwimemori xa useluhambeni okanye ungqubana phakathi kweeofisi ngaphandle kwekhompyuter.
Enye yezona ziqheno ezinkulu zicelo zoluhlobo lwe-server, kwi-Apache okanye kwi-geoserver ityala, elithatha ixesha elide ukuba lifunde ukulifaka okokuqala; Kule meko kuyimfuneko kuphela ukucofa iqhosha elithi "qala" okanye "yeka" ukuyeka.
I-OpenLayers, i-Tilecache kunye ne-Featureserver program zisebenza kwifayile ye-index.html, emva kokuba iseva ye-Apache iphakanyisiwe (ukusuka http://localhost).
Kwimeko ye-QGis, ibandakanya ingca, kuya kufuneka ukhethe isikhombisi xa usenza okokuqala (.. \_ usbgis \_ apps \_ Quantum GIS \_ grass). Oku kuyakudingeka ukuba uqhagamshela kwenye ikhompyuter kwaye inkqubo inika elinye igama kwi-drive.
I-PortableGIS ilayisenisi phantsi kweGPL kwaye isebenza kuphela kwiinkqubo zokusebenza ze-Windows.
Ukusuka apha ungalanda.
ingca GvSIG OS mapserver QGIS shp
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ingxaki eHonduras ... iyaqhubeka
Post Next Allallsoft, khuphela iimephu ezivela kwiGoogle, Yahoo, Bing kunye ne-OSMOkulandelayo »
Iimpendulo ezili-10 ziya "kwi-GIS ephathekayo, zonke zivela kwi-USB"
Ndiyabonga kakhulu, isebenza kakuhle.
Disemba, 2016 kwi
Yeyiphi na inguqulelo ibandakanya i-gvsig, ndikhuphele i-v5.2 kunye ne-v5.6 version kwaye ayizisi. Nje i-qgis kwaye ndinengxaki yokwenza isihluzo kwaye ayindivumeli ukuba ndihlele ungqimba, ngaba kungenxa yokuba iyaphatheka?
Jaime Sánchez uthi:
Ndifake i-portableGIS, kodwa kuphela i-QGIS ifakiwe, ezinye iinkqubo ze-GIS azifakiwe, umntu uyazi ukuba kutheni.
Manuel Valderrama uthi:
Ndiyilungisa, ndiyifumene http://www.faunalia.com/usbgis
Sawubona Ikholeji, ndibuya kwakhona ukusuka eChile. Umbuzo, awukwazi ukuba lekhonkco iphelile nini?
Ukukhupha kunye nokubingelelwa okuvela eChile!
Ngoko, akukho nto, kufuneka isebenze kakuhle.
Imibuzo emibini, ukufuduka kwezinto ezingakanani?
Ingaba imephu ephakathi kweyodwa indawo ye-UTM?
Ukuba uthengisa imephu yomgwaqo ukuya ku-kml kwaye uyivula ngeGoogle Earth, ngaba uhlala ngaphandle?
Ndiyabulela kakhulu ngokuphendula
Xa geoserver kwi kwiqumrhu ufake variable SRS 900913 leyo esebenzisa iimaphu google ngemephu yam indlela ubonisa kakuhle kodwa kunokuba asibeke Spain map ekunene España.Como ntoni na ukusombulula ?
Yiyiphi ifomathi ifayile ifanele iboniswe kakuhle kwimaphu?
Kubonakala ukuba ingxaki yile ndlela, ngokuba ugcino lwakho lendlela e-UTM kunye neGoogle Maps ludinga ukulungelelaniswa kweendawo.
Ndiqala nge-geoserver kunye nabavuli. Mna umaleko kwindlela ndifuna ukushiya ngaphezu imaphu Google kodwa geoserver nto kum; ndinikeni ke imigca ekunene, kunokuba imigca phandle ezifana amabala. Kwi-console ye-tomcat inika impazamo elandelayo:
Ukusetyenziswa okunokwenzeka kwe-Tranverse_Mercator »uqikelelo ngaphandle kwendawo eyiyo.
Ububanzi bungaphandle kwemida evumelekileyo
Ngaba umntu uyazi ukuba ingaba yintoni?
Ndizama ukufaka umgca (ifayile yokwandisa .shp) kunye ne-quantum gis kwisiseko se postgres dtaos. Xa ufaka i fayili inika impazamo elandelayo:
Iingxaki xa ufaka izinto zendawo kwifayili:
C: \_ Amaphepha kunye nezixhobo \_ umsebenzisi \_ Idesktop \_ uvavanyo \_ p_file.shp
Isiseko sedata sinike iphutha ngelixa liqhuba le SQL:
FAKA KU "esidlangalaleni». »Ifayile_p» IINQAKU (0, '110000 ′, I', '0 ′,' 471.649 ', NULL, NULL, NULL,' 0 ′,… (cut off the rest of the SQL)
BUG: umqolo omtsha wobudlelwane «fayile_p» waphula umthetho wokutshekisha «ukunyanzeliswa_kwezi_the_geom»
Ngaba umntu unokundinceda?